‘दलितलाई टिकट दिए, भोट दिदैँनन् भन्ने सोच छ’ |
‘दलितलाई टिकट दिए, भोट दिदैँनन् भन्ने सोच छ’
प्रकाशित मिति :2017-06-19 11:16:17
दलित महिलाको हकहितका लागि काम गर्दै आउनुभएकी कला स्वर्णकार दलित महिला संघकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । लामो समय यस क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएकी स्वर्णकारले महिला सशक्तिकरणका साथै दलित महिलाको मुद्धामा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिला संख्यात्मक रुपमा धेरै आएपनि नेतृत्वमा भने खासै आउन सकेनन् । यसै सन्दर्भमा रहेर अध्यक्ष स्वर्णकारसँग महिला खबरले गरेको यो संवाद ।
दुई दशकपछि स्थानीय तहको पहिलो चरणकोे निर्वाचन सम्पन्न भयो, दलित महिलाको सहभागिता कस्तो रह्यो ?
पहिलो चरणको निर्वाचनमा दलित महिलाको सहभागिता राम्रै रह्यो । किनकी जुन संविद्यानले नै वडा तहमै दलित महिलाको सिट सुरक्षित गरेको छ । त्यसलै वडा सदस्यमा दलित महिलाहरु धेरै आए । केही तहमा उपप्रमुखमा समेत केही दलित महिलाहरु आएका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा २ हजार ४ सय २४ दलित महिला निर्वाचित भएको अवस्था छ । त्यसमा पनि नगरपालिका र गाउँपालिकामा ९ जना महिला उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनु भएको छ ।
मनाङ, मुस्ताङ लगायत हिमाली जिल्लामा आरक्षण कोटामा समेत दलित महिलाहरु आउन सकेनन् नी ?
वडा तहमा दलित महिला अनिवार्य भनेर प्रावधान त ल्यायो । तर समुदाय स्तरमा पार्टीले प्रचार प्रसार गर्न सकेनन् । समयपनि छोटो भएको कारण पनि कोटा खाली भयो ।
दलित महिलाहरु आरक्षण कोटामै सिमित भएको पाइयो, अन्य पदहरुमा जान नसक्नुको कारण ?
अझै संविद्यानले नै वडामा एक जना दलित महिलाको कोटा नछुट्याएको भए यसमा पनि आउने थिएनन् दलित महिलाहरु । केही रुपमा आउने थिए तर यति धेरै आउने थिएनन् । किनकी पार्टीले दलित महिलालाई अबसर नै दिने थिएनन् । अर्को अरु पदमा दलित पुरुषलाई त दिएका छैनन् महिलालाई त दिने कुरो नै भएन । अहिले सम्मपनि दलितलाई टिकट दियो भने भोट दिदैँनन् । पार्टीले हार्छ भन्ने सोच छ । त्यसैले दलित महिलालाई कोटामै सिमित राखिएको अवस्था छ ।
तपाईको संस्थाले दलित महिला शसक्तिकरणका लागि के कस्ता काम गरिरहनुभएको छ ?
दलित महिला संघले दलित महिलाहरुलाई पहिले देखि नै संगठित र सशक्तिकरणका कामहरु गर्दै आएका छ । अहिले पनि दलित महिलालालाई राज्य र समाजले किन पछाडि पार्यो भन्ने विषयमा हामीले महिलाहरुलाई सशक्तिकरण गर्दै आएका छौ । यसले दलित महिलालाई ठूलो सहयोग पुरेको छ भन्ने लाग्छ ।
अझै पनि दलित महिलाहरु पछाडि नै छन्, कसरी उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक स्थिति उकास्न सकिएला ?
यसका लागि दलित महिलाका लागि भनेर लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर त्यो एक, दुई वर्षको नभई दश वर्षको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । उनीहरुको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि विशेष प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता कार्यक्रम ८, १० र १५ वर्षका लागि लक्षित गर्यो भने दलित महिलाको माथि उकास्न सकिएला ।
दलित महिलामाथि बोक्सी, छुवाछुत, यौनिक जस्ता हिंसाहरु कायमै छ नी ?
दलित महिलालाई २१ औँ शताव्दीमा आइपुग्दा समेत छुवाछुत, बोक्सी लगायतका आरोप लगाएर कुटपिट गरेको, मलमुत्र खुवाएको थुप्रै घट्नाहरु छन् । समाज अहिलेपनि अन्धविश्वासमै छ । अहिले पनि मान्छेले अन्धविश्वासलाई स्विकारी राखेको अवस्था छ । समाजमा बोक्सी भन्ने पनि दलित, गरिब र एकल महिला नै हुन्छन् । जो गरिब छ, जो महिला छ, बृद्धाहरु छन् उनीहरुलाई बढि यातना दिएको अवस्था छ । अझ त्यसमा बढि दलित महिलाहरु छन् । छुवाछुतको नाममा दलित महिलाले धेरै यातानहरु पाएका छन् ।
कानुनमा पनि छुवाछुत कसुर ऐन छ । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसक्यो तर अझै छुवाछुतका घट्ना घट्न सकेको छैन । समाजमा एक थरि मानिसमा छुवाछुत गरिरहनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । यसमा दलित महिलाहरु प्रत्यक्ष छुवाछुतसँग संलग्न हुन्छन् । जस्तै गाउँमा मठ मन्दिर, पानी पधेँरा, भएका कारण दलित महिलाहरु बढि पिडित छन् ।
दलित महिलाका समस्याहरु के के हुन् ? कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
दलित महिलाको प्रमुख समस्या गरिबी हो । अर्को अवसर पनि हो । अबसर पाए नै अगाढि बढ्ने हो । उनीहरुले अवसरै पाउँदैनन् । त्यसले गर्दा बोल्ने ठाउँमा उनीहरु बोल्न सक्दैनन् ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि राज्यले नै विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । दलित महिलाको लागि नीति अनुसार कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने समग्र दलित महिलाहरु अगाडि आउनु सक्छन् । राज्यको जुन समावेशी सिद्धान्तका नीति छ । त्यो नीतिलाई अवलम्बन गर्न सकियो भने अवश्य दलित महिलाहरु अगाडि आउन सक्छन् ।
अहिले सदस्यमै भएपनि धेरै दलित महिला स्थानीय सरकारमा पुगेका छन् । अब कस्तो परिवर्तन देख्न सकिएला ?
वडा तहमा दलित महिला आउँदा उनीहरुको जिम्मेवारी भूमिकामा भरपर्ने कुरा हो । कति उनीहरु कार्यकारी पदमा पुग्छन् अधिकार उनीहरुले प्रयोग गर्न पाउँछन् त्यसमा भरपर्छ । कतिपय उपमेयरमा गएका दलित महिलाहरुले दलित महिलाको क्षेत्रमा अवश्य काम गर्न सक्छन् ।
वडा सदस्यमा गएका महिलालो पनि दलित महिलाका सकारात्मक र सुधारात्मक तवरले पहल गर्न सक्छन् । दलित महिलाहरुका लागि आवाज उठाउँनेछन् । यसमा अन्य दलित महिलाहरुको समेत पहुँच पुग्ने देखिन्छ । आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् ।
दोस्रो चरणको विर्नाचन हुदैछ, पहिलो निर्वाचनमा देखिएका त्रृटिहरु के के थिए, अब कसरी जानुपर्ला ?
पहिलो चरणको निर्वाचनमा महिलालाई उपप्रमुखमा मात्रै सिमित गरियो । प्रमुखमा धेरै महिला आउन सकेनन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष, वडा अध्यक्षमा महिलाहरु कम निर्वाचत भएको अवस्था छ । थोरै समय भएका कारण सक्षम व्यक्तिहरु पनि छुटेको देखियो ।
दोस्रो निर्वाचनमा पार्टीहरुले टिकेट दिदाँ हाम्रा भन्दा राम्रा मान्छेलाई टिकेट दिनुपर्छ । जस्को समाजमा राम्रो छवि छ , विकास गर्ने उसको भावनमा छ । त्यस्तो मान्छेलाई पार्टीले टिकट दिनुपर्छ । महिलाहरुलाई पनि वडा अध्यक्षमा, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयरहरुमा टिकट दिनुपर्छ ।